တပ်မတော်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်တောင် အာဏာလိုချင်မက်မောတဲ့သဘောမရှိဘူး – Nyang Media
INDP / အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်ကို
ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အထိ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ အရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လိုတော့ ကျနော်တို့မယုံဘူးဗျ . . .
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်သည့် အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်ကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ မူဝါဒနဲ့ ပါတီသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းကို ပြောပြပေးပါ။
UWM – အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကို (၁ . ၆ . ၂၀၁၀) ရက်နေ့က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ပါတီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကတော့ (၂၇) ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လို့အမည်ပေးထားရတာက တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေဖို့နဲ့ အင်းလေးဒေသ၊ အင်းအမျိုးသားတွေနဲ့ တခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွည်ချက်နဲ့ ဒီအမည်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကတော့ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့က ပြည်သူအများအလိုရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ ပိုပြီးတိတိ ကျကျ ပြောရရင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး ပါတီကြီး၊ ပါတီငယ်ဆိုပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုမရှိဘဲ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိရပြီး လေးစားစွာဆက်ဆံမယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံး ထာဝစဉ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် နိုင်ငံတော်အစိုးရက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမယ်၊ လိုအပ်ရင်နိုင်ငံတော်က အထောက်အကူပေးရမယ်ဆို အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်လာရင် ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေဝင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ ရှိလာပြီ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အင်းအမျိုးသားတွေအများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်၊ ဒေသတွေမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မူဝါဒချမှတ်ထားတယ်။
ကျနော်တို့အင်းအမျိုးသားတွေက အင်းလေးဒေသ ညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာပဲ အများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ပါတီက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာလည်း ညောင်ရွှေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်တွေကပဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ ညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် (၅) ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ (၅) နေရာမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ပအို့ဒေသ၊ ဓနုဒေသ၊ ရှမ်းဒေသတွေမှာတောင် ကျနော်တို့ဝင်မပြိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း လေးစားသောအားဖြင့် သူတို့ဒေသတွေမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာမျိုး ကျနော်တို့မလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့အင်းလေးဒေသ ညောင်ရွှေမှာ တခြားဘယ်ပါတီဖြစ်ဖြစ် လာပြိုင်ရင်လည်း ကျနော်တို့က သဘောထားကြီးစွာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားပါမယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ပါတီရဲ့ မူတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်နှဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲ။
UWM – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ခုနကပြောတဲ့ ညောင်ရွှေမြို့နယ်က မဲဆန္ဒနယ် (၅) ခုပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ (၅) နေရာထဲမှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာအတွက်ကတော့ ငါးမြို့နယ်ပြိုင်မှ အနိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီငါးမြို့နယ်က တောင်ကြီး၊ ကလော၊ ရပ်စောက်၊ ဖယ်ခုံ၊ ဟိုပုံး စတဲ့မြို့တွေလည်းပါနေတော့ အနိုင်ရဖို့ခဲယဉ်းတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီ ၂၀၂၀ မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်နေရာအတွက် ဝင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၄) နေရာအနိုင်ရခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အနိုင်ရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူး။ အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာရော ဘယ်လိုရလဒ်မျိုးကို မျှော်လင့်ထားပါသလဲ။
UWM – ကျနော်တို့ကတော့ ရေကုန်ရေခန်းယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာလာရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ပါတီက ၂၀၁၀ တုန်းကဆို (၃) ပါတီပဲရှိပါတယ်။ ၂၀၁၅ မှာကျတော့ (၈) ပါတီလောက်ရှိလာပါတယ်။
အခု ၂၀၂၀ မှာတော့ (၉) ပါတီလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ကျနော်တို့က တော်တော်လေးကို ကျားကုတ်ကျားခဲယှဉ်ပြိုင်မှ ရနိုင်မယ့်အနေ အထား ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကျနော်တို့ပါတီက အင်းအမျိုးသားတွေအတွက် အမြဲတမ်းရှိနေရမယ့်ပါတီဖြစ်တာကြောင့် ရှုံးရင်လည်း နိုင်ငတယ်လို့ပဲခံယူသလို၊ နိုင်ရင်လည်း အနိုင်လို့ပဲ ကျနော်တို့ခံယူပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်းအမျိုးသားတွေအတွက် နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်မှာနေရာတစ်ခုရရှိဖို့လိုအပ်တာကြောင့် ဘယ်ပါတီတွေပဲလာပြိုင်ပါစေ ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ အင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်း ရရှိစေဖို့ ပါတီတည်မြဲနေအောင် အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။
ကျနော်တို့က ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုလိုက်နာပြီး ရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်သည်ဖြစ်စေ မျှမျှတတယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတော့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆိုတဲ့ရာထူးဟာ နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လို့သုံးသပ်မိပါသလဲ။ တစ်ဆက်တည်း အဲဒီရာထူးဟာ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ့်ကိစ္စတွေကို ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းပြပေးပါဦး။
UWM – ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့အင်းတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဗျ။ အဲဒီလိုမမျှော်လင့်ဘဲ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ကြေးတွေ ပေးခဲ့တယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုပါတော့ အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာကိုယ်စားလှယ်ရှိရမယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ ၂၀၁၀ မှာ ကျနော်တို့က ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ထဲမှာ အင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကက်ဘိနက်တက်ပြီး ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ ကျနော်တို့က ဇော်ကန့် လန့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုခေါ်တွေ့တဲ့အခါ ကျနော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ် (၇) ဦးအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတွေကိုပါခေါ်တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆိုပေမယ့် ဝန်ကြီးတာဝန် ဝန်ကြီးအဆင့်ဖြစ်မနေတာကြောင့် ပြည်နယ်အဆင့်ဝန်ကြီးဖြစ်ဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေက တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး နိုင်ငံတော်ခုံရုံးကိုတင်ရတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့လည်းပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စမှာ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့က အဓိကဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့။
တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်အတွက် ကတော့ နိုင်ငံရေးအရလုပ်ပိုင်ခွင့်ကတော့ တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်မရသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့တုန်းကဆို တခြားဝန်ကြီးတွေလို …
ခုံရုံးတက်တဲ့အခါ နောက် ဆုံး ခုံရုံးက ကျနော်တို့ကိုအနိုင်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုအနိုင်ရတော့မှ ပြည်နယ်အဆင့်တခြားဝန်ကြီးတွေလို ကျနော်တို့လည်း ကက်ဘိနက်တက်ခွင့်ရလာပါတယ်။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေနဲ့တန်းတူ ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့အဆောင်အယောင်တွေရရှိလာခဲ့တယ်။
ဒီအချက်ကတော့ ကျနော်တို့ပထမအကြိမ် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတွေ ဇော်ကန့်လန့်ဘဝကနေ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရလာပြီး ကက်ဘိနက်တက်ရောက် နိုင်တဲ့၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဝန်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီလို ကက်ဘိနက်တက်ရောက်ခွင့်ရလာတော့ အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ သွားရာလမ်းကြောင်းတွေကို ကျနော်တို့သိလာရတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ ဝမ်းသာပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က အင်းလေးကန်ဒေသမှာ အင်လေးဇုန်ဝင်ကြေးဆိုပြီး အစိုးရကကောက်နေတာရှိတယ်။ အဲဒီ အင်းလေးဇုန်ဝင်ကြေးကို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ အင်းလေးကန်သာယာလှပရေးအတွက် အသုံးပြုခွင့်ရဖို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရထံ ကျနော်တို့တင်ပြခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ပြည်နယ်အစိုးရက အင်းလေးဇုန်ဝင်ကြေး ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို အင်းလေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ အင်း လေးကန်သာယာလှပရေးအတွက် ဆောင်ရွက်အသုံးပြုခွင့်ရခဲ့တယ်။ အသုံးပြုခွင့်ရပေမယ့် ကျနော်တို့က ငွေကိုကိုင်ပြီးသုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက် သင့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိရင် ပြည်နယ်အစိုးကိုတင်ပြပြီး သူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်ခုက အမျိုးသား နေ့ကိစ္စပေါ့။ လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ အမျိုးသားနေ့ဆိုတာရှိသင့်တယ်။ ကျနော်တို့အင်းတိုင်းရင်းသားတွေမှာ အမျိုးသားနေ့ ဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ပါတီက ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး အင်းအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားရေးရာဥပဒေတွေ မပေါ်သေးလို့ အင်းအမျိုးသား အနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူး၊ အင်းသားဆုံဆည်းရာနေ့အနေနဲ့ပဲလုပ်ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ အင်းလေးဒေသနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် (၁) ရက်နေ့ကို အင်းသားဆုံဆည်းရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီနှစ်က လူပေါင်း (၄၀ ,၀၀၀) လောက်နဲ့ စလုပ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ အင်းအမျိုးသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့ အင်းအမျိုးသားတွေရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံတွေကို လူငယ်တွေကအစ တန်ဖိုးထားဝတ်ဆင်လာမှုတွေပိုများလာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ အင်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာ အင်းအမျိုးသားနေ့ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့ အင်းသားဆုံဆည်းရာနေ့ကိုလည်းဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အင်းလေးဇုန်ဝင်ကြေး ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သုံးခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးလင်းရေးတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အရင်က ကျနော်တို့အင်းလေးဒေသမှာ ကျေးရွာ (၁၂) ရွာလောက်ပဲ လျှပ်စစ်မီးရခဲ့ပေမယ့် ကျနော်တို့တာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်းမှာ ကျေးရွာပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကို လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အင်းလေးကန်ရေရှည်တည်တန့်ရေးအတွက် သုံးနေတဲ့ စက်တွေဟာ အသုံးပြုလာတာ နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ ခေတ်မီစက်ယန္တရားဝယ်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်လာရောက်လည်ပတ်တုန်းကကျနော်တို့တင်ပြပါတယ်။ အဲဒီလိုတင်ပြခဲ့လို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကျပ်သိန်း (၄,၀၀၀) စိုက်၊ အင်းလေးဇုန်ဝင်ကြေးထဲက ကျပ်သိန်း (၆,၀၀၀)စိုက်ပြီး ကျပ်သိန်း (၁၀,၀၀၀) တန် စက်ကြီးကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိစ္စ တိုင်းရင်းသားပါတီအများစုကတညီတညွှတ်တည်းတင်ပြတဲ့ ရက်ပေါင်း (၁၈၀) ကိုလည်း လက်မခံဘဲ ရက်ပေါင်း (၉၀) လုပ်ခဲ့တာကလည်း တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့ …
ငြမ်းမီဒီယာ – မေးခွန်းထဲမှာပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆိုတဲ့ရာထူးရဲ့ နိုင်ငံရေးအရအရေးပါမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပေးပါဦး။
UWM – တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်အတွက် ကတော့ နိုင်ငံရေးအရလုပ်ပိုင်ခွင့်ကတော့ တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့်မရသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့တုန်းကဆို တခြားဝန်ကြီးတွေလို ဌာနလက်ကိုင်တောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကာကွယ်တဲ့ဥပဒေကို တိုင်းရင်းသား (၂၇) ဦးနဲ့ ပထမဆုံးရေးဆွဲခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဟာကိုပြည်သူ့ လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့မှာ တိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေကို ကျနော်တို့ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒုတိယအစိုးရသက်တမ်းမှာ ဒီဥပဒေအရ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့ပထမအကြိမ်အစိုးရသက်တမ်းတုန်းကတော့ ဌာနမရှိလို့ ဘတ်ဂျက်မရှိ၊ ဘတ်ဂျက်မရှိတော့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တောင် ပြည်နယ်အစိုးရကိုတင်ပြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရကခွင့်ပြုမှလုပ်ရတဲ့ပုံစံကနေ အခုဆို ကိုယ့်ဌာနနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်ဘတ် ဂျက်နဲ့ကိုယ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့။
တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအရဆိုရင် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဟာ တခြားပြည်နယ် ဝန်ကြီးတွေလို တန်းတူတော့မရသေးပါဘူး။ ဒီလိုနိုင်ငံရေးအရတန်းတူဖြစ်အောင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်က ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတွေမှာ ကျနော်တို့တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့အနိုင်မရတော့ အပြင်ကိုရောက်သွားပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတာ အားနည်းသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ့်အမျိုးသားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးက တော်တော်လေးအငြင်းပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့နားလည်တာကတော့ ဘယ်လိုပဲ …
ငြမ်းမီဒီယာ – အခုလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမျှတမှုအခြေအနေကို ဘယ်လိုအကဲခတ်မိပါသလဲ။
UWM – ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်အနိုင်ရမှုကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော်တို့လည်း ငွေရေးကြေးရေး အဆင်မပြေတဲ့ကြားကနေ ခုံရုံးအထိရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာက ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရ ကြံ့ခိုင်ရေးလွှတ်တော်ဖြစ်နေပေမယ့် အဲဒီကြံ့ခိုင်ရေးရဲ့ကန့်ကွက်မှုကို ခုံရုံးမှာကျနော်တို့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ခုကို အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုကကန့်ကွက်ပေမယ့် ခုံရုံးမှာ အနိုင်ရခဲ့တော့ ကျနော်တို့တော်တော်အံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၅ အထိကတော့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကျနော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တစ်နှစ် (၂) ကြိမ် ခေါ်တွေ့ခဲ့တာရှိတယ်။
စုစုပေါင်း (၁၀) ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကလည်း ကျနော်တို့ဒေသကို (၅) ကြိမ် လာတယ်။ ဒုသမ္မတက (၃) ကြိမ်လာတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ကျနော်တို့နဲ့ပါတီချင်းမတူပေမယ့် နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆံခွင့်ရခဲ့တယ်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလဲ (၁၀) ကြိမ်လောက်တွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ တွေ့ဖန်များတော့ ချစ်ကြည်ဆိုသလို ကော်မရှင်နဲ့ ကျနော်တို့ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခု ၂၀၁၅ ကော်မရှင်နဲ့ကတော့ တခြားစီပါပဲ။ အခု ၂၀၁၅ ကော်မရှင်က ကျနော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုခေါ်တွေ့တာ (၄) ကြိမ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီ (၄) ကြိမ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဖြစ်မနေခေါ်တွေ့ရတာက (၂) ကြိမ်ရှိပါတယ်။
ကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဖို့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေ စုပေါင်းပြီးစာတင်တာကိုလည်း ဘာမှအကြောင်းမပြန်ပါဘူး။ သမ္မတနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့လည်း (၂) ကြိမ်လောက်တောင်းခဲ့ပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး။ နောက် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိစ္စ တိုင်းရင်းသားပါတီအများစုကတညီတညွှတ်တည်းတင်ပြတဲ့ ရက်ပေါင်း (၁၈၀) ကိုလည်း လက်မခံဘဲ ရက်ပေါင်း (၉၀) လုပ်ခဲ့တာကလည်း တော်တော်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီအများစုရဲ့သဘောထားကိုလည်း ကော်မရှင်က လက်မခံခဲ့ဘူး။ အဲဒါအပြင် မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေ မဲပေးနိုင်အောင် မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတာကို ကျနော်တို့လေ့လာကြည့်တော့ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာသိပ်မလုပ်ပေးဘဲ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပဲ များများလုပ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ လုပ်အားပေးခေါ်တဲ့အခါလည်း ကျနော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားမှာတွေ့ရတာကတော့ လက်ရှိအာဏာရပါတီက ပါတီဝင်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ပုံစံ (၁၀) မလိုဘူး၊ မှတ်ပုံတင်နဲ့မဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကလည်းတစ်ဖက်ဝမ်းသာစရာကောင်းပေမယ့် တစ်ဖက်မှာဘာရှိသလဲဆိုတော့ တချို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာ သွေးနှောတွေ မှတ်ပုံတင်ပြပြီးမဲပေးလာရင် ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အခက်အခဲတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို သိပ်လည်းမဖြေချင်ဘူး။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အထိ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ အရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လိုတော့ ကျနော်တို့မယုံဘူးဗျ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမျှတမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုတိကျတဲ့စကားလုံးနဲ့ထပ်ပြောပေးပါဦး။
UWM – သူတို့ လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာလည်း ဟုတ်ပါပြီ။ ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတာလည်း ရှိသင့်သလောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မျှတမှုဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်မှုရှိကောင်းရှိမယ်၊ ပွင့်လင်းတာရှိသင့်သလောက်ရှိမယ်၊ ဒါပေမယ့် မျှတတာလုံးဝမရှိဘူး။
ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ ရက်ပေါင်း (၁၈၀) ကနေ (၉၀) လုပ်တာတွေပေါ့။ မှတ်ပုံတင်နဲ့မဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတာ တစ်ပိုင်းဝမ်းသာစရာပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီနောက်မှာ ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ငွေကြေးအင်အားကလည်းမတောင့်တင်းတဲ့ကြားမှာ အများကြီးနဲ့ပြိုင်ရမှာဆိုတော့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြိုင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကငွေကြေးအင်အားတွေနဲ့ဖိလာရင် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြိုင်ပေမယ့်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။
တချို့နေရာတွေမှာ ပါတီကြီးတွေက ပစ္စည်းတွေပေးတယ်၊ ငွေတွေတိတ်တဆိတ်ပေးတယ်၊ သူတို့ကိုမဲပေးရင် အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်လို့လည်း ကျနော်တို့ကြားရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပွင့်လင်းတယ် လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလက်ခံလို့ရပေမယ့် လက် တွေ့မြေပြင်အနေမှာ တွေ့မြင်နေရတာတွေအရ မျှတမှုကတော့ လုံးဝမရှိပါဘူး။
AA နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ် နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စသဖြင့် သူတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ …
ငြမ်းမီဒီယာ – ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကဘယ်လိုအကူအညီမျိုးပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားသလဲ။ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုမျှော်လင့်တယ်ဆိုတာကိုပါပြောပြပေးပါ။
UWM – ကျနော်တိုနိုင်ငံတော်မှာ လွှတ်တော်ရယ်၊ အစိုးရရယ်၊ တပ်မတော်ရယ်၊ ပြည်သူရယ်ဆိုပြီး ဖိုခနောက်ဆိုင် (၄) ခုရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ လက်ရှိအာဏာရအစိုးရရဲ့ ကော်မရှင်ကိုလည်းတွေ့ခွင့်တောင်းပါတယ်။ သူတို့ကတွေ့ခွင့်မပေးပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်တောင်းပါတယ်။ တွေ့ခွင့်မပေးပါဘူး။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ ၂၀၁၉ ကတွေ့ခွင့်တောင်းတော့ ၂၀၁၉ မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတွေ့ခွင့်ပေးပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ လောက်ကဆိုရင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်မတော်နေ့မှာ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖိတ်ပြီး တပ်မတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ တပ်မတော်စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်တက်ခဲ့ရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်ဗျ။
စောစောကကျနော်ပြောခဲ့သလို နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က ကျနော်တို့ဒေသကို သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် (၅) ကြိမ်လာခဲ့တယ်။ ဒုသမ္မတတွေက (၃) ကြိမ်လာခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော် တစ်ကြိမ်ပဲလာခဲ့ပြီး ဒီပြင်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲပြီးသွားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးမှု၊ စီးပွားရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု မရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒါအပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကလည်း တောင်ကြီးတို့ ပင်လုံတို့ကိုလာပေမယ့်လည်း ကြားကာလမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုး လုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ အဲဒါတွေက အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းတွေပေါ့။
အဲဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးက ကမကထလုပ်ပြီး တက်မလားဆိုတော့ ကျနော်တို့ကတက်မယ်ဆိုပြီးသွားတွေ့ကြပါတယ်။ သွားတွေ့တော့ ကျနော်တို့ ပါတီအနေနဲ့မျှော်လင့်တာက နိုင်ငံတော်မှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ရေရှည်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြောမယ့်စကားကို နား ထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့။ အဲဒီလို နားထောင်ကြည့်ချင်တဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့ပါတီတွေကကျတော့ သူတို့ရဲ့ ကော်မရှင်နဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ် နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စသဖြင့် သူတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့တင်ပြကြပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ကျနော်တို့အကုန်လုံးကတော့ အပြုသဘောနဲ့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတင်ပြကြတာပါပဲ။ အဲဒီလို ရိုးရိုးသားသားနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်း တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ သူတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ အဲဒီမှာတစ်ခုပြောရရင် အခု facebook မှာတက်လာတဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးက တော်တော်လေးအငြင်းပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့နားလည်တာကတော့ ဘယ်လိုပဲအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကို တပ်မတော်က ဥပဒေဘောင်ထဲကနေကာကွယ်မယ်၊ တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ဥပဒေဘောင်ထဲကနေကာကွယ်မယ်၊ ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ တပ်မတော်အနေနဲ့လုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ကျနော်တို့နားလည်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် သွားတွေ့တာကျနော်တို့အကျိုးရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားစေတနာကို သိရပါတယ်။ တပ်မတော်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ဆက်ဆံရသလောက် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်တောင် အာဏာကိုလိုချင်မက်မောတဲ့သဘောမရှိဘူး။ သူတို့လည်း အာဏာကိုမမက်မောဘူးဆိုတာပြောပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့တွေ့တာကလည်း ဒီတစ်ကြိမ်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်နေ့တွေမှာလည်းတွေ့ခဲ့တာပါပဲ။ အခုလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းတွေ့ခွင့်မပေး၊ ကော်မရှင်ကလည်းတွေ့ခွင့်မပေးတော့ တပ်မတော်နဲ့တွေ့ ခွင့်ရလို့တွေ့ကြတာပါ။ ဒီအပေါ်မှာ သဘောထားအမြင်လွဲတာကိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခြေခံဥပဒေအရတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတွေ့ဆုံမှုမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်လို့ တချို့ကလည်းပြောကြတော့ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆပါသလဲ။
UWM – ကျနော်တို့ပါတီတွေဆိုတာ ပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုပ် သလို အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုလည်းလုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ တပ်မတော်ဆိုတာကလည်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို လုပ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကိစ္စမှာ သူ့အနေနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကျနော်တို့သိပေမယ့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ တန်းတူညီတူလုပ်လိမ့်မယ်ထင်လို့ တချို့ပါတီတွေက ဒီလိုပြောတယ်လို့ပဲ ကျနော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျား။
UWM – တရားမျှတသည်ဖြစ်စေ မမျှတသည်ဖြစ်စေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျတော်တို့ကတော့ ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ မျှမျှတတဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါမယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကအရေးကြီးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်တော့ အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။
ကျနော်တို့က ရှုံးရင်လည်းနိုင်တယ်၊ နိုင်ရင်လည်းနိုင်တယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြီးကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကြီးပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးစင်မြင့်မှာနေရာတစ်ခုရလာတာဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၀ မှာကျနော်တို့အောင်မြင်တယ်။ ကျနော်တို့ဝမ်းသာတယ်။
၂၀၁၅ မှာကျနော်တို့ရှုံးတယ်။ ရှုံးပေမယ့် ကျနော်တို့နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ကျနော်တို့မျှမျှတတဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားပါမယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာလည်း ကျနော်တို့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီနိုင်ငံရေးကိုတော့ ကျနော်တို့သပ်သပ်လုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
Tags: ညောင်ရွှေ, တပ်မတော်, တိုင်းရင်းသား, နိုင်ငံရေး, ရွေးကောက်ပွဲ, အင်းလေးကန်, အင်းအမျိုးသား